१४० जना रेड जोनमा, – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/१४० जना रेड जोनमा,
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा हालसम्म १५२९ जनाको कोभिड–१९ परीक्षण भएको जानकारी दिएको छ । यसमध्ये ९ जनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएको छ भने १ जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् ।
यस्तै, हाल काठमाडौँमा १२ तथा काठमाडौँबाहिर १०२ आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले सम्भावित संक्रमितको सूची ‘रेड जोन’ मा कूल १४० जनालाई राखिएको पनि जानकारी दिए । यता, खरिपाटीको क्वारेन्टाइनमा रहेका ९४ जनाको परीक्षण गर्दा नतिजा नेगेटिभ आएको पनि डा. देवकोटाले जानकारी दिए ।
बैठक भत्ता र खाजा खर्च कटौती, नयाँ गाडी नकिन्ने